Nuru Studio - RUBPAGE // Muviri Rubha / NuRu Eotic Massage
Muviri Rubha Maoko mana Nuru Slide kuchirapa
Julia musikana akasarudzika uye akadzidziswa musikana anopa kushambadza muviri kuManhattan. Iye anogara achitarisira kuwana zviitiko zvitsva uye kuita shamwari. Iine runako, hushamwari hunhu uye kuda mune zvakawanda, nguva inopedzwa naye irwo rwendo rwemashiripiti rweakachena mufaro.
Julia ndeye yakasikwa 34C. Iye ane 5'7, asi akareba mudiki mune stilettos iyo yaanopfeka kazhinji. Ane muviri wakakombama, makumbo matete, uye rakatenderera rakanaka bundu. Akasvinudzwa uye ane hunhu hwehunhu hwegirazi.
Zvichida iwe unogona kuvimba naye nebanga uye uwane rakasarudzika trim "pasi"? Chero chaunosarudza, chichava chinonakidza! Kuti uwane rumwe ruzivo, ndapota, fona.
Kubata kwenyama kwaJulia, aromatherapy, uye bodyrub New York ndizvo zvese zvaunoda kuti unzwe uchifara. Iye ane hunyanzvi hwakanyanya mune hunyanzvi hweantantra saka ingo kurara kumashure uye unzwe mafungu ekunakidzwa kwakachena kutora pamusoro pemuviri wako nepfungwa.
Muvhuro: 10:30 AM - 3:00 AM
Chipiri: 10:30 AM - 3:00 AM
Chitatu: 10:30 AM - 3:00 AM
China: 10:30 AM - 3:00 AM
Chishanu: 10:30 AM - 3:00 AM
Mugovera: 10:30 AM - 3:00 AM
Svondo: 10:30 AM - 3:00 AM